ဦး နှောက်ဆက်သွယ်မှု: သင်၏မှတ်ဥာဏ်ကိုကာကွယ်ပေးပြီးအားဖြည့်ပေးသည်။ [ဒီမှာ] ရှာပါ။
Intelligence Pill: အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများကိုရှာဖွေပြီးအကောင်းဆုံးတစ်ခုကိုရှာဖွေပါ။
Cayenne ငရုတ်ကောင်း - ဒီရိုးရာအမွှေးအကြိုင်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေပါ။
ထုတ်ကုန်များ	 27 2018 ဇွန်လ
Brain Connection - အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ပရိုဂရမ်ပါ။
Alzheimer: ဤရောဂါအမည်ကိုလူအများသိပြီးကြောက်ရွံ့နေပြီဖြစ်သည်။ နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာလူသားတွေဟာသူတို့ရဲ့မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်နဲ့အလွတ်ကျက်မှတ်နိုင်စွမ်းတွေဆုံးရှုံးတာပုံမှန်ပါပဲ။ သို့သော်လူများစွာသည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအဆင့်ရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်ကိုမသိကြပါ။ ဤကိစ္စတွင်၊ အချိန်များသည်အဖိုးတန်ပြီးလူငယ်များသည်အနာဂတ်၌၎င်းတို့အားရောဂါမကူးစက်အောင်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Brain Connection သည်သင်၏အားနည်းသောမှတ်ဥာဏ်ကိုအဆုံးသတ်စေပြီးဤအခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားလာစေမည့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Brain Connection ကိုဘယ်လိုစာရင်းသွင်းရမလဲ။
သင်အစီအစဉ်ကိုသိပြီးမကြာမီစာရင်းပေးလိုလျှင် link ရှိ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးသင်၏ရပိုင်ခွင့်အရာအားလုံးကိုလက်ခံရရှိရန်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ဘဏ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
သင်၏အချက်အလက်များသည်လုံခြုံပြီး site သည်အမှန်တကယ်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးလိမ်လည်မှုအန္တရာယ်မရှိချေ။ သို့သော်၎င်းသည်တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ ၀ င်ရောက်သူများအတွက်သာအာမခံသည်။ သင်၏ ဦး နှောက်ဆက်သွယ်မှုအစီအစဉ်ကို ၀ ယ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာအထက်ပါ link မှတဆင့် (သို့) အောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ တူညီသောအစီအစဉ်ရှိသည်ဟုဆိုသောအခြားဆိုက်များသည်လိမ်လည်မှုများ၊ အင်တာနက်ထောင်ချောက်များအတွက်မကျပါနှင့်။ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှသာ ၀ ယ်ယူပါ။
တရားဝင် ၀ က်ဆိုက်ကို ၀ င်ရောက်ရန်အောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
[junkie-alert style = "red"] သတိထားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအစီအစဉ်၏တရားဝင်ရောင်းချသူမဟုတ်ပါ။ ထုတ်ကုန်ရဲ့တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်ရောက်ဖို့ConexãoCérebroအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သာအသိပေးသည်။ [/junkie သတိပေးချက်]
ငွေပေးချေမှု၊ ပေးပို့မှု (သို့) ပေးအပ်သောကုန်ပစ္စည်း၌အန္တရာယ်များမရှိစေရေးအတွက်သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုကိုထုတ်လုပ်သူနှင့်တိုက်ရိုက်ပြုလုပ်သည်ကိုအမြဲသေချာပါစေ။ ConexãoCérebro၏အမှု၌တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည် https://sl.conexaocerebro.com.br ဖြစ်ပြီး၎င်းမှတဆင့်သင်အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏သံသယများအားလုံးကိုရှင်းလင်းစေမည့်သီးသန့်အားသာချက်များရရှိလိမ့်မည်။
ဆက်သွယ်မှု ဦး နှောက်၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပြန်လည်ဖော်ပြရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
ConexãoCérebro၏အားသာချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်အသိပညာကိုဖြန့်ဝေခြင်းကိုလက်လှမ်းမီသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့်ယုံကြည်သောအထူးကုသမားတော်တစ် ဦး ကဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အစီအစဉ်၏တန်ဖိုးသည်အတတ်နိုင်ဆုံးသေးငယ်သည်။ ဤတန်ဖိုးသည်မှန်ကန်သောထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးမှုတို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန်သာဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုလုပ်ရန်များစွာအပ်နှံထားသောပညာရှင်များအားတန်ဖိုးမဖြတ်ဘဲ၎င်းကိုလုပ်ရန်သာဖြစ်သည်။
ဤစီးရီးအတွက်ပုံမှန် ၀ င်ကြေးမှာ R $ 190,80 ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း၊ သင်တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်ရောက်လျှင်၊ သင်ပေးချေရန်ထူးခြားသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိလိမ့်မည် တစ်လလျှင် BRL ၁၂.၉၀ ၁၂ ကြိမ်မရ။ မင်းအဲဒါကိုတွေးဖူးလား တစ်လလျှင် BRL 15 ထက်နည်းသည် မင်းရဲ့မှတ်ဥာဏ်ကိုမြှင့်တင်ပေးပြီးသတိမေ့ရောဂါရဲ့အန္တရာယ်ကနေမင်းကိုအမြဲကယ်နိုင်လား။ ဒါဟာတကယ်ကိုထိုက်တန်ပါတယ်။
ဘဏ်စလစ် (သို့) ခရက်ဒစ်ကတ်ဖြင့်လည်းပေးချေနိုင်ပြီးကတ်ပေါ်တွင်အတိုးမရှိဘဲအကြိမ်များစွာခွဲရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ဘဏ်စလစ်တွင် ၀ ယ်ယူမှုအားအတည်ပြုရန်အချိန်ကြာသည်၊ ထို့ကြောင့်အကြောင်းအရာများသို့သင်၏ဝင်ရောက်ခွင့်သည်ကဒ်ထက်အနည်းငယ်ပိုကြာလိမ့်မည်။
သင်၏ Brain Connection Program ကို ၀ ယ်ယူရန်အောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အားလုံး၊ ဦး နှောက်ဆက်သွယ်မှုဆိုတာဘာလဲ။
ConexãoCérebroသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး မှမွေးဖွားခဲ့ပြီး Alzheimer ရောဂါကာကွယ်ရန်ထိရောက်သောအကြံဥာဏ်များပါ ၀ င်သောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
လူများစွာသည်အနည်းဆုံးအသက်ကြီးသူတစ် ဦး သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုကြားဖူးပြီးဤရောဂါသည်မည်မျှကြောက်ရွံ့သည်ကိုသိသည်။ သို့သော်လည်းလူအနည်းငယ်က၎င်းသည်အသက် (အသက်ကြီးရုံသာမက) အခြားအသက်အရွယ်ရှိလူတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းသိသည်။ ဒါကိုမသိဘဲ ဦး နှောက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးငါတို့ရဲ့မှတ်ဥာဏ်ကိုအချိန်မတိုင်မီအိုမင်းစေတယ်။
ထို့ကြောင့်ConexãoCérebroသည်၎င်း၏စာရင်းပေးသွင်းသူများအတွက်အကြံဥာဏ်မျိုးစုံကိုပေးသည်။ ပေါ့တ်ကာစ်များ၊ အစီရင်ခံစာများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်အခြားမီဒီယာပုံစံများသည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုကာကွယ်ရန်လုံးဝအရာအားလုံးရှိသည်။ ဒီအစီအစဉ်မှာမင်းရဲ့ ဦး နှောက်စွမ်းရည်ကိုစစ်ဆေးဖို့မှတ်ဥာဏ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ မှတ်ဉာဏ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ စမ်းသပ်မှုတွေကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်မင်းမှာသီးသန့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုသုံးခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းတွင်ဒေါက်တာ Annunciato အားသင်တိုက်ရိုက်မေးပြီးသင်၏မေးခွန်းအားလုံးကိုဖြေသည်။
ဟုတ်တယ်! မင်းကလေဖြတ်တာလို့ထင်ရင်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုရှောင်လွှဲလို့မရဘူး၊ မင်းမှားတာပေါ့။ အမှန်မှာ၊ အယ်ဇိုင်းမားရောဂါရှိသူများအတွက်ကုသမှုသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်၊ အကြောင်းမှာဤရောဂါသည်စနစ်တကျမပြုစုလျှင်အလွန်လျင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်သည်။
သို့သော်အသက်ကြီးရင့်သူများအတွက်သတိမေ့ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ ပြီးတော့ဒါကဘာမှရှုပ်ထွေးတာမဟုတ်ဘူး။ အစီအစဉ်အရနေ့စဉ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းများသည်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရာတွင်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှု၊ စူးစိုက်မှုနှင့်သွက်လက်မှုတို့ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ပြီးတော့ရလဒ်တွေကမြန်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့နေ့တိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်လေ့ကျင့်ရင် ဦး နှောက်ကမြန်မြန်ဖွံ့ဖြိုးလာလိမ့်မယ်။
သင့် ဦး နှောက်အင်္ဂါကိုကြွက်သားတစ်ခုထက်မပိုဟုထင်သောကြောင့်၎င်းသည်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်လေ့ကျင့်ခန်းလိုအပ်သည်။ ပြီးတော့သူကသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးအတွက်တာဝန်ရှိတာမို့ဘယ်အရာမဆိုကသူ့ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် Alzheimer ကိုကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါ Brain Connection ကမလိမ်ပါဘူး။ အချိန်မဖြုန်းပါနှင့်။
ဒေါက်တာ Nelson Annunciato ကဘယ်သူလဲ။
ကောင်းပြီ၊ ဒီအစီအစဉ်အတွက်ဘာကိုနားလည်ပြီးပြီလဲ။ ဒါပေမယ့်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်တိုးတက်စေဖို့ဒီစိတ်ကူးကိုဘယ်သူလုပ်ခဲ့တာလဲ။ ဒေါက်တာ Nelson Annunciato အကြောင်းလူအများပြောလေ့ရှိတဲ့စကားကဘယ်သူလဲ။
ConexãoCérebroကိုဖန်တီးသူ၊ ၎င်းကို Programa Annunciato ဟုလည်းခေါ်နိုင်သည်၊ ဒေါက်တာ Nelson သည်သူပြောသောအရာကိုကောင်းစွာသိသည်။ ဤအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်ဆရာဝန်သည်ဘရာဇီးတွင်သာမကပြည်ပတက္ကသိုလ်များတွင်ပါအလွန်ကျော်ကြားသည်။ မြူးနစ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ USP ဘွဲ့ရနှင့်ပါရဂူဘွဲ့ရသူသည်သူရောက်ရာနေရာကိုရောက်ရန်အဝေးကြီးသို့ရောက်နေပြီ။
ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကဒေါက်တာ Annunciato သည်အမြော်အမြင်ရှိသောဥာဏ်ကြီးရှင်တစ် ဦး ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဖော်ပြခဲ့ပြီး၎င်းသည်ဘရာဇီးနှင့်ဂျာမနီတို့တွင်ပညာသင်ရန်ပညာသင်ဆုနှစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တတ်သောအာရုံကြောမောက်ကြွက်၏ Cerebellar Cortex ၏ Ultrastructural Study in Postgraduate တွင်သူနားလည်ဆုံးအရာသည် ဦး နှောက်ဆက်သွယ်မှုများအကြောင်းဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒီအစီအစဉ်ကိုနယ်ပယ်မှာအထူးပြုတဲ့သူတစ် ဦး ကဖန်တီးပြီးမင်းရဲ့လေ့လာမှုတွေကမင်းဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးကိုပေးခဲ့တဲ့အဖိုးတန်ဗဟုသုတတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့လုံးလုံးလျားလျားရည်စူးပါတယ်။
ဒေါက်တာနယ်လ်ဆင်၏သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုအင်တာနက်တွင်ရနိုင်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ဒေါက်တာ Annunciato သာလျှင်အကြောင်းအရာအကြောင်းပြောပိုင်ခွင့်ရှိသောကြောင့်Conexão Cerebro ကိုအခြားရောင်းချသူများနှင့်မ ၀ ယ်သင့်ကြောင်းသိရန်အရေးကြီးသည်။
Conexão Cerebro သို့စာရင်းပေးသွင်းခြင်းဖြင့်ငါဘာရလိမ့်မည်နည်း။
မှတ်ဥာဏ်ကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန် Annunciato အစီအစဉ်ဖြင့်သင်သည်သင်၏မှတ်ဥာဏ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သောအစားအစာများနှင့်ဆေးဝါးများအကြောင်းလျှို့ဝှက်ချက်များကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
Podcasts များသည်ဒေါက်တာ Nelson ကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအသံများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ထဲမှ ၅ ခုကိုတစ်လသင်ရလိမ့်မည်။ ဤအသံသွင်းမှုများတွင် ဦး နှောက်ရောဂါဖြစ်စေသောအကြောင်းအရင်းအမှန်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးသင်၏စိတ်နှင့် ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးကိုအားကောင်းလာစေရန်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုသင်ယူပါလိမ့်မည်။ ဒေါက်တာသည်လေဖြတ်ခြင်း၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့အခြားရောဂါများကိုရှင်းပြသည့်အတိုင်းဤအရာများအားလုံးကိုအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက်ကန့်သတ်မထားပါ။
သင်ပြောသမျှအရာအားလုံးကိုချရေးလို့မရရင်အသံဖိုင်တွေကိုနားထောင်ရတာအကျိုးမရှိဘူးမဟုတ်လား။ ထို့ကြောင့်လစဉ်အစီရင်ခံစာများ၌သင်အသံသွင်းမှုတစ်စုံတစ်ရာကိုလက်လွတ်မခံနိုင်အောင် podcasts များတွင်သင်ကြားခဲ့သောအပိုဆုအချို့ရှိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အရာအားလုံးကိုလက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်။
ဗွီဒီယိုများတွင်မှတ်ဥာဏ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်မှန်ကန်သောသင်ယူမှုနည်းလမ်းတို့ပါ ၀ င်သောသိမြင်မှုစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းစနစ်များကိုသီးသန့်တွေ့ရလိမ့်မည်။
ဦး နှောက်ချိတ်ဆက်မှုဖြင့်သင်အပါအ ၀ င်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၌လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်။
စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်းနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းကဲ့သို့သောအခြား ဦး နှောက်ရောဂါများကိုကာကွယ်ပေးသည်
➦ မယုံနိုင်စရာ! ငါအခု Brain Connection အစီအစဉ်ကိုစာရင်းပေးသွင်းချင်တယ်။
Mercado Livre မှာConexão Cerebro ကိုငါ ၀ ယ်နိုင်သလား။
မဟုတ်ပါ။ Mercado Livre သည်လူများစွာကို site ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုပြီးသူတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချသည်။ တကယ်တမ်းဖြစ်လာတာကမကောင်းတဲ့သူတွေကမူရင်းဆိုဒ်တွေထက်ပိုမပို့ဘူး၊ ပိုစျေးကြီးတဲ့အတုတွေရောင်းတာဘဲ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သင်တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်သင်လိုချင်သောထုတ်ကုန်ကို ၀ ယ်ရန်အမြဲအကြံပြုသည်။
အထူးသဖြင့်ConexãoCérebroအတွက်အစီအစဉ်ကိုအခြား ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့်ရယူရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် sl.conexaocerebro.com.br link မှတဆင့်အစီအစဉ်၏ဖန်တီးသူထံမှတိုက်ရိုက်အကြောင်းအရာများနှင့်ဘာသာရပ်၌အထူးပြုအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်တို့နှင့်မေးခွန်းများကိုအဖြေပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာနယ်လ်ဆင်သာလျှင် Annunciato အစီအစဉ်ကိုအွန်လိုင်းတွင်ရရှိစေသည်။ ဒါကြောင့်ဒီအထုပ်ကိုရောင်းဖို့တောင်းဆိုတဲ့အခြားဆိုဒ်တွေကိုမယုံပါနဲ့။ သေချာသည် ဒါဟာပြောင်မြောက်တယ်။
အစီအစဉ်တွင် Requame Aqui အပေါ်မကျေနပ်မှုများရှိပါသလား။
Connection Brain သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အရာအားလုံးကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ကုန်မဟုတ်ဘဲအင်တာနက်မှတိုက်ရိုက်လက်ခံသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စားသုံးသူ၏ထုတ်ကုန်၏ဂုဏ်သတင်းအတွက် Requame Aqui ကိုအမြဲရှာဖွေရန်အကြံပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဒေတာနှင့် ၀ ယ်ယူမှုလုံခြုံမှုကိုသင်အာမခံသည်။ အခြား ၀ ယ်သူများထံမှပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသို့မဟုတ်ဆိုးသောအတွေ့အကြုံများရှိ၊ မရှိကြည့်ရန်လည်းကောင်းပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းသည်ကတိပေးထားသောအရာကိုပေးလျှင်။
ဤအချက်ကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့ Dieta JáမှConexão Cerebro no Reclame Aqui ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်သုတေသနလုပ်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ငါတို့အံ့သြသွားတယ်၊ ဒီမှာConexão Cerebro အကြောင်းတိုင်ကြားတဲ့စာမျက်နှာတိုင်းမှာစာမျက်နှာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာကုန်ပစ္စည်းသည်ကတိပေးထားသောအရာများကိုဖြည့်ဆည်းပေးရုံသာမက၎င်းကို ၀ ယ်ပြီးသောသူများထံမှတိုင်ကြားခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အရမ်းများတယ်မဟုတ်လား။ သင်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးနိုင်ပြီးသင်၏ CC ကိုလက်မှတ်ထိုးရကျိုးနပ်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
သင်၏မှတ်ဉာဏ်ကိုမြှင့် တင်၍ သင်၏ ဦး နှောက်စွမ်းရည်ကိုဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ဦး နှောက်ဆက်သွယ်မှုအလုပ်လုပ်သလား။ သက်သေခံချက်များကိုကြည့်ပါ
မင်းအပေါက်ထဲကိုမ ၀ င်ဘူးဆိုတာသေချာချင်ရင်မှန်တာထက်ပိုလုပ်ပါ။ မင်းရဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုမပစ်ပါနဲ့။ သင် ၀ ယ်တဲ့အရာကတကယ်အလုပ်ဖြစ်လားဆိုတာကြည့်ဖို့အခြားလူတွေရဲ့ထောက်ခံချက်တွေကိုကြည့်ပါ။
ဦး နှောက်ဆက်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်လိုအပ်သမျှကိုသိသောကြောင့်၎င်းကိုအောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ ၀ ယ်နိုင်သည်။ အချိန်မဖြုန်းပါနှင့်သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပါ။
ခြေထောက်များလေ့ကျင့်ခန်း - သင်၏ခြေထောက်ပုံဖော်ပုံကိုလေ့လာပါ
စိတ်သက်သာစေသောဆေးများ - အကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးထိရောက်မှုကိုကြည့်ပါ။
Goji Plus: ကျန်းမာသူများ၏လျှို့ဝှက်ချက်!